SIDEE LOO GOOGOOYAA MOOSKA, BAALASHA CAADIGA AH IYO DUURJOOGTA DUURJOOGTA AH, HA NOQOTEE IN LA GOOYO - BEERAHA DIGAAGA
Sidee loo googooyaa baalasha baalasha
Ducks ku nool beeraha uma baahna inay duulaan - cunto iyo biyo ayaa ku dhow, ma jiraan saan-hayayaasha. Laakiin dabeecadda ayaa ku dhacaysa, oo shimbirruhuna way cirka isku sii jiraan. Waxay u badan tahay in aanay awoodi doonin inay duulimaad u duulaan, laakiin neerfayaashoodu waxay khasaari doonaan milkiilaha, iyo xitaa beerta ay ka heli karaan khamriga. Aan baranno sida aan u daadinno ducks guri.
Ma lagama maarmaan in la furo
Inta badan cufanka madoowga (indoutki), laakiin noocyada kale ayaa mararka qaarkood doonaya xorriyad.
Waxaa suurtagal ah in la dhexdhexaadiyo kuleylka dabka adigoo daboolaya qalinka leh shabakad, laakiin markaan suurtagal ahayn, habka loo jajabiyo baalasha ayaa u imanaysa samatabbixinta. Thanks to isaga, shimbirta ma siin doonto dareenka si ay u duulaan dalalka diiran ee leh dufcadaha duurjoogta.
Baro sida loo cuno ducks, sida loo quudiyo, haddii ay suurta gal tahay in la ilaaliyo digaagga iyo shinbiraha qol isku mid ah, sida loo sameeyo balli for berriga iyo shinbiraha gacmahaaga.
Laga soo bilaabo bareerooyinka nidaamkaan, waxaa suurtagal ah in la soo saaro maqaarka (wakiilada jinsiga ka soo horjeeda) muuqaalka shimbirta.
Waxa kale oo aan suurtagal ahayn in la soo gooyo baadad ee duck, kaas oo ku shubi doona farcankiisa, maxaa yeelay waxa ay daboolaysaa baalashooda baalasheeda oo ay u rogaan.
Waqtigee ayuu kudoonayaa
Waqtiga ugu habboon ee kicinta garaantu waa xilliga dayrta hore. U gaabi ka dib markii la gooyey, haddii kale baadad la jarjarey ayaa dhici doonta oo la beddeli doonaa kuwa cusub.
Baalalka qunyar-socodka ah ayaa la gooyey xoolaha da'doodu gaartay 3 bilood (ugu yaraan 15 toddobaad).
Ma taqaanaa? Nabarada duurjoogga ah ee aan lahayn dareen-celin, taas oo u oggolaanaysa inay ku socdaan barafka qabowga.
Goobaha baalasha ma aha mid adag, laakiin shimbirku ma jecla shaqadan, markaa waxaad u baahan tahay inaad hore u sii diyaariso:
maqnaansho dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah;
saxaro amar ah ama sawir qaade ah oo la fariisiyo inta lagu jiro geedi socodka;
gacmo-gashi (shaqaale, aan lahayn xargo), inkasta oo qaar ka mid ah yihiin kuwo raaxo leh iyaga oo aan lahayn;
dharka leh dhuumo dhaadheer - shimbirta ayaa isku kalsoonaan karta waxayna isku dayi kartaa inay isku xoqdo.
Ogow sida ukumaha duurjoogta, hilibka duurga, dufanka dufanka ayaa faa'iido leh.
Ku fadhiisashada saxarada, nuucyada loo xushay habka loo maro habka waa in lagu dhajiyaa dhinicii iyo jilbaha. Samee dhexdhexaad, sidaas darteed shimbirku ma jebin, isku day inaadan waxyeelo u geysan. Maqasyada ayaa hal gacan laga qaadayaa, kan labaadna wuxuu ku faafaa garabka.
Haddii duurku uu xasilan yahay, markaa waxaad si fudud u dhigi kartaa jilbahaaga kuna cadaadi suxulkaada, laakiin ugu fiican dhammaantood, marka uu jiro kaaliye, markaa mid ayaa haya shimbirta, iyo kan labaadna wuxuu googooyaa baalashiisa. Waxaa habboon in la ogaado in haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, ka dibna duck, habka gebi ahaanba waa xanuun la'aan. Qalabaynta, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah hababka soo socda.
Waa muhiim! Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad garatid hal garab. Marka shimbirtu ay lumiso dheelitir iyo awood uma yeelan doonto inay duuliso..
Habka xoqitaanka ayaa ah inay dhuubaan boogaha., wax sida khafiifinta ee khariidadda qalabka timo-jaraha. Si arrintan loo sameeyo, maqaarka ayaa lagu dabaqayaa baaluqa iyo jarjaridda ayaa la barbardhigayaa ul. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dhinaca xannaanadda, taas oo ballaaran.
Sidaa darteed, baalashu way dhuuban yihiin, hawadu waxay u gudbi doontaa godadka, shimbiruna waxay noqon doontaa mid aad u adag in la duulo. Laakiin habkani ma bixinayo 100% dammaanad ah, tan iyo xoogga hammuunku wuxuu ku filnaan karaa inuu ku duulo xayndaabka hoose.
Ma taqaanaa? Roogga iyo baalasha bustaha looma shubo biyo sababtoo ah baruurta. Looma yaabin in ay jiraan wax la yiraahdo "sida biyaha ka baxsan daanka dhabarka."
Video: Nidaamka Duck Wing
Doorashada labaad waxay ku lug leedahay kala goynta nidaamka amar leh. Iyada oo habkan, dhererka iyo width ee baalasheeda waa la soo gaabin:
Sidaa daraadeed, boodhkii ugu horeeyay waxaa la jarjaray usha (qaybta ballaaran ayaa la gooyaa), sidaas darteed, ballaadhku waa yar yahay.
Qodobbada labaad waxaa lagu jarjaray maqnaasha kala badh, i.e. dhererka ayaa la gaabiyaa.
Kadibna waa inaad bedesho siyaabaha. Sidaa darteed, kala badh baadiyaha waa la soo gaabin doonaa, kan labaadna wuxuu noqon doonaa mid khafiif ah.
Waa muhiim! Koofiyadaha gooyaa wax ka badan hal mar sanadkii.
Marka la jajabiyo habka saddexaad, baalasha ayaa la soo gaabinaa qiyaas ahaan nus. Maqasyada waxaa loo habeeyay bareeyaha, boodboodku wuxuu ku dhacaa garabka.
Markaad isticmaasho habkan, waxaa muhiim ah in la jarjiyo baalasha ka hor intaan qarxinta rodoosku bilaabmin si looga fogaado dhaawaca naaska. Taabashadani waa mid waxtar leh, laakiin muuqaalkeedu wuxuu ka dhigayaa shimbir shimbir ah.
Waa suurtagal in la gooyo shimbirta raacsan xariiqda 1 iyo 2, maxaa yeelay waxay u dhibeysaa, xariiq 3 ma keeneyso natiijooyin. Khadadka suurtagalka ah ee loo yaqaan "trim trim" - 4, 5, 6.
Baro astaamaha mooska, Peking, shimbiraha Bashiir, jecel buluuga, jir-53, mulaar.
Natiijada xayawaan kasta waa mid ku meel gaadh ah - illaa xitaa tan danbe, marka ugu horeysa ee aadan helin sida ugu wanaagsan ee aad jeclaan lahayd, ha welwelin: sanad gudaheed waxaa jiri doona fursad cusub si loo hagaajiyo xirfadaha baaluqan ee baalasha baalalka ah.
Goynta baalasha ducks waa fududahay. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad fidiso garabka duck ee dhererkeeda oo dhan iyo si taxadar leh u xoqo bucooyinka koowaad, oo ku saabsan 5 cm maqaarka. Hadda nasiibku ma awoodi doono inuu duulo.
Oo waxaa jira muuqaal. Si taxaddar leh u fiirso marka garabku sii faafo. Wanaagsan in la wada sameeyo. Marka hore waan jaray dhiigga. : Pirat: Kadibna waxay ogaatay mar hore.
Waxa kaliya oo la jecel yahay in la sugo maadada ay u gudubto. Iyo maqaarku waxay qaadaan fiiq iyo weyn.
Kuma sharxi kartid mitirka.))) Waxaad u baahan tahay inaad eegto qalinka. Haddii uu uluhu madhan yahay (waa muuqan), gooji geesinimo. Oo haddii weel la yidhaahdo, mar dambe lama baahin.)